Ny orinasa Masimo dia mikasa ny hanakana ny fivarotana ny Apple Watch Series 6 | Vaovao IPhone
Ny orinasa Masimo dia mikasa ny hanakana ny fivarotana ny Apple Watch Series 6
Tamin'ny volana Janoary tamin'ny taon-dasa, ny orinasa teknolojia ara-pahasalamana Masimo dia nitory an'i Apple tany Etazonia, nilaza fa ny orinasa monina any Cupertino dia mampiasa ny haitao izay novolavolain'ity orinasa ity tao amin'ny Apple Watch. Nambaran'ity orinasa ity fa efa an-taonan'ny orinasa i Apple mampihena ny fizotry ny fitsarana ary avy amin'ny orinasa dia nandray fepetra.
Araka ny hitantsika ao amin'ny Bloomberg, Masimo Corporation, dia nametraka fitoriana tany amin'ny komisiona iraisam-pirenena momba ny varotra amerikana mba handrarana ny fanafarana Apple Watch any Etazonia, fitarainana izay dinihin'ny vatana ity.
Masimo dia nilaza fa hatramin'ny 2013, Apple dia liana ny hiara-hiasa amin'ity orinasa ity Ho an'ireo fiasa mifandraika amin'ny fahasalamana amin'ny laharam-pamantaranandrony, na izany aza, Apple dia tsy nahatanteraka ny tanjony fa nampiasa ny haitao an'ity orinasa ity hanampiana asa fanaraha-maso ara-pahasalamana samihafa amin'ny Apple Watch.
Ny Apple Watch Series 6 manitsakitsaka ireo patanty 5 izay mampiasa hazavana ampitaina amin'ny vatana handrefesana ny haavon'ny oksizenina amin'ny rà, hoy ny orinasa. Ity haitao patantin'ny orinasa ity no laharam-pahamehany.
Azo inoana fa ny fifanolanana dia hiafara amin'ny fifanarahana izay afaka mitory eo anelanelan'ny 50 sy 300 tapitrisa dolara isan-taona amin'ny mpanjaka, hoy i Tamlin Bason, mpandalina Bloomberg.
Raha ny filazan'ilay orinasa dia tsy hampijaliana ny vahoaka raha mahomby amin'ny farany Apple Watch mijanona tsy amidy any Etazoniasatria ny asan'ny fandrefesana oksizena amin'ny rà "dia tsy zava-dehibe amin'ny fahasalamam-bahoaka na amin'ny fiadanam-bahoaka."
Nanambara ihany koa ny orinasa fa ankoatry ny voalaza fa nangalatra tsiambaratelo momba ny varotra dia manana porofo izany Apple dia nanakarama mpiasa Masimo mihoatra ny iray hanatanteraka ny tetikasanao fitaovana mifantoka amin'ny fahasalamana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny orinasa Masimo dia mikasa ny hanakana ny fivarotana ny Apple Watch Series 6
Ary izaho izay nino fa masina i Apple ...
Ny iPhone 13 dia hamela anao handraikitra horonantsary miaraka am-piandohana fa tsy hifantohana